Huawei gosipụtara Kirin 980, ihe nhazi ya kachasị ike | Gam akporosis
Kirin 980: Huawei kacha ike processor bụ ugbu a ukara
Edere Ferreno | | Huawei
Ekwenyela ya na izu ole na ole gara aga ma taa ọ ghọọla eziokwu. Kirin 980, onye nhazi ohuru ohuru nke Huawei ka ewetara na IFA 2018. Chinesedị ndị China eguzobewo onwe ya dị ka otu n'ime ihe kachasị ọhụrụ na imepụta ndị nrụpụta. Ihe na - eme ọzọ na ụdị a, nke izizi n’ụwa ka emepụtara na usoro 7 nm.
E gosipụtara Kirin 980 dị ka ihe nhazi kacha mma nke ika ahụ Ruo ugbu a. Huawei na-ahapụ anyị na nhazi dị ike, yana nnukwu ọnụ ọgụgụ nke ọgụgụ isi na nke ahụ na-achọ iguzogide ndị nhazi Snapdragon.
Na nkenke, Huawei gosipụtara ọzọ nnukwu ọrụ ha na-arụ na nke a. Ha na-ahapụrụ anyị ndị nrụpụta dị ike, nke doro anya na-enyere ekwentị ha aka ime nnukwu ihe. E nwere ọtụtụ ụzọ dị mkpa maka onye ezinụlọ ọhụrụ Kirin a. Anyị na-agwa gị n'okpuru.
1 Nzube nke artificial
2 Emepụtara na 7nm na ike
3 Kedu mgbe Kirin 980 ga-abata?
Dị ka atụ anya, ọgụgụ isi na-arụ ọrụ ịchọta na Kirin 980. Chinesedị ndị China etinyela teknụzụ a dịka otu isi ihe dị na nhazi a. Ọ nwere ọrụ nke ijikọ ihe ndị ahụ ejikọtara ọnụ, na-enyekwa akara ngosi maka atụmatụ ọdịnihu nke ndị nrụpụta China.
Ngwaọrụ afọ gara aga webatara NPU (Neural Processor Unit) na igwe ojii na-arụ ọrụ, n'afọ a ha chọkwara ịga n'ihu. N'ihi na Huawei na-eweta NPU abụọ na nke a. Ekele ya, mmeghachi omume ọsọ nke ihe nhazi a mụbara.
N'ezie, ọsọ bụ otu n'ime ike nke ihe nlereanya a. Dị ka ika ahụ si kwuo, ihe nhazi ọhụrụ a ga-amata ihe okpukpu abụọ dị ka Snapdragon 845 na ugboro anọ dị ka A11 site na Apple. Ime ka ọ pụta ìhè na ha enweghị ọtụtụ ihe ga-enwere anyaụfụ asọmpi na nke a.
Emepụtara na 7nm na ike
Anyị na-eche ihu nhazi ọhụụ n'ụzọ ọ bụla. Dị ka Kirin 980 bụ onye nhazi izizi jiri teknụzụ 7nm. A na-ekwu okwu banyere teknụzụ a ogologo oge, mana ọ bụ ruo ugbu a ka ụdị mbụ arụpụtara na ya abata. Ya mere, ọ bụ Huawei na-adaba na nke a.
Ike na ume ọrụ bụ akụkụ abụọ ọzọ nke na-eme ka nhazi a na-enwu. CPU nwere Cortex -A76 cores, nke a na-esonyere ya na Mali-G96 graphics GPU. E wezụga nke ahụ, anyị nwekwara modem Cat 21 na ya. Huawei chọrọ ka ọ bụrụ ihe nrụpụta siri ike, rụọ ọrụ nke ọma, onye nwere ọgụgụ isi nke na-eme ka njikọta. Ihe isi nhazi bu:
2 Cortex-A76 cores nwere ọsọ ọsọ ruo 2.6 GHz
2 Cortex-A76 cores nwere ọsọ ọsọ ruo 1.92 GHz
4 Cortex-A55 cores nwere ọsọ ọsọ ruo 1.8 GHz
Companylọ ọrụ ahụ enyela data gbasara arụmọrụ na arụmọrụ nke Kirin 980. Ekele dịrị ha na anyị nwere echiche doro anya nke ihe ị ga-atụ anya ya. E kwuru na ọ ga-adị 75% dị ike karịa Kirin 970 na 58% na-arụ ọrụ nke ọma karịa onye bu ya ụzọ. A nnukwu itu ukwu na àgwà, dị ka ị pụrụ ịhụ.
Iwebata a ihe onyonyo ohuru. Ekele ya, ọkwa kachasị elu nke nkọwa ga-enwe ike ịnapụta n'ụdị ọnọdụ niile. Ọbụna n'ọnọdụ ọkụ siri ike, dị ka foto abalị.
Kedu mgbe Kirin 980 ga-abata?
N’izuụka ndị a ka ekpughere na atụmatụ Huawei ga-ebu ụzọ gosipụta ihe nhazi ọhụrụ a, tupu ekwentị ọhụrụ ọgbara ọhụrụ aga ahịa. Ekwentị mbụ iji Kirin 980 ga-abụ Mate 20 na Mate 20 Pro. Ekwentị abụọ a ga-arụ ọrụ n'oge mgbụsị akwụkwọ nke afọ a
N'ezie, ekwenyela ya na a ga-enwe ihe omume n’abalị iri na isii nke ọnwa Ọktoba n’obodo London iweta ekwentị abụọ a elu-ọgwụgwụ. Ha abụọ ga-arụ ọrụ site na nhazi kacha mma nke akara ndị China mepụtara ruo ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Kirin 980: Huawei kacha ike processor bụ ugbu a ukara
Alcatel 3T 8: Mbadamba gam akporo mbụ na ahịa